Fitaovana IPhone | IPhone News (Pejy 3)
Ny iPhone 12 dia ho avy tsy misy headphones ary tsy misy charger raha ny filazan'ny mpandalina iray
Ny taranaka iPhone manaraka dia mety hidona amin'ny tsena tsy misy charger ary tsy misy headphone miaraka amin'ny fifandraisana misy varatra
OtterBox dia manolotra karazana lozisialy fitaterana finday sy tsy misy tariby
Case maker OtterBox dia nanangana karazana bateria azo alefa haingana sy haingana tsy misy tariby.
Sonos Move izao dia misy amin'ny loko fotsy ary manana fahaleovan-tena ora iray fanampiny
Sonos dia manavao ny Sonos Move misy fahaleovan-tena mandritra ny adiny iray hafa ary mandefa modely vaovao amin'ny loko fotsy fotsy mba hamenoana ireo mpandahateny azo entina.
Loko vaovao ho an'ny tranga silicone iPhone 11 sy 11 Pro
Apple dia miaraka amina fehin-kibo vaovao ho an'ny Apple Watch, loko vaovao ho an'ireo tranga misy silika an'ny maodelin'ny iPhone 11
Koogeek dia manolo-tena hiaro ny tranonay
Koogeek dia manolotra antsika tolotra amin'ny vokatra an-trano izay tsy tokony hadinointsika: takamoa jiro maranitra, sensor sy varavarana maro hafa!
Raha mitady mpandahateny kalitao ianao hankafy ny mozika ankafizinao ao an-trano, eny an-tsena dia ...
Ny tendron'ny Apple Pencil dia mety misy bokotra
Ny tendron'ny Apple Pencil dia mety manana bokotra iray. Toy ny totozy, ny patanty dia mampiseho tendron'ny Apple Pencil miaraka amin'ny bokotra mitambatra.
Ny AirPods Studio vaovao dia hatao any Vietnam manomboka amin'ny volana Jona
Ny AirPods Studio vaovao dia hatao any Vietnam manomboka amin'ny volana Jona. Efa fantatsika hoe iza no manao azy ireo, aiza ary oviana. Ary na ny anarana aza: AirPods Studio.
Koogeek tolotra amin'ny automatique an-trano dia niverina
Raha te-hanomboka hanjaka ao an-tranonao ianao, na te-hanohy hanao izany, miaraka amin'ireo tolotra omen'i Koogeek antsika, dia mety ho toekarena tokoa izany.
Apple dia afaka nandefa Powerbeats Pro vaovao tamin'ny loko vaovao manaitra
Apple dia afaka nandefa loko vaovao an'ny Powerbeats Pro, loko manaitra ary tena mampiseho fa ho ampiana amin'ny 4 ankehitriny
Nimbus +, mpandrindra ny Steelseries MFi miaraka amina endrika vaovao
SteelSeries dia manohy miasa amin'ireo mpanara-maso MFi hanatsarana ny traikefantsika amin'ny vokatra Apple sy ny Nimbus + no fanampiny farany.
Ny headphones ivelany an'ny Apple dia azo antsoina hoe AirPods Studio
Ny headphones ivelany an'ny Apple dia azo antsoina hoe AirPods Studio. "Over-ear" ho avy avy any Apple dia hamita ny sakana AirPods.
SteelSeries dia manana mpamily Nimbus + vaovao vonona ho an'ny fitaovana Apple
SteelSeries dia manana mpamily Nimbus + vaovao vonona ho an'ny fitaovana Apple. Izy io dia Stratus Duo amin'izao fotoana izao ho an'ny fitaovana Apple voamarina ao amin'ny FMi.
Sonos dia mandefa mpandahateny vaovao izay misy feon-kira miaraka amin'i Dolby Atmos
Sonos dia manavao ireo mpandaha-teny voalohany aminy amin'ny fehezam-peo vaovao mifanaraka amin'ny Dolby Atmos, mpandahateny studio vaovao ary subwoofer mahery.
Ny Powerbeats Pro vaovao dia hanomboka tsy ho ela
Ny famoahana vaovao dia mampiseho izay mety ho fanavaozana ny headphone tsy misy tariby Powerbeats Pro avy amin'ny orinasa Beats
Manana olana amin'ny AirPods Pro anao? Manolotra anao vahaolana mety i Apple
Apple dia namoaka tahirin-kevitra iray izay anolorana antsika sosokevitra vitsivitsy hamahana olana roa mahazatra amin'ny AirPods Pro.
Apple dia manavao ny firmware an'ny AirPods Pro
Taorian'ny fanavaozana ny volana Desambra tsy nahomby izay nahatonga ny fanafoanana ny tabataba dia namoaka fanavaozana firmware vaovao ho an'ny AirPods Pro i Apple.
Nanoleaf dia manomboka mandray baiko ho an'ny hazavana hazavana hexagonal vaovao
Ireo tovolahy ao Nanoleaf dia manomboka famandrihana mialoha ireo takelaka hexagonal vaovao hamoronana tontolo tsara indrindra ao an-tranontsika.
Mujjo dia manampy ny loko maitso amin'ny fonony vita amin'ny hoditra
Mujjo dia manampy loko vaovao amin'ny tranga hoditra ho an'ny iPhone 11 Pro sy iPhone 11 Pro Max. Amin'ity tranga ity dia asehonay anao ny loko Slate Green
Ny lohan'ny Apple Music, mandray an'i Beats
Oliver Schusser dia lasa lohan'ny Beats, ankoatry ny fanohizany ho lohan'ny Apple Music
Vocolinc Flowerbud, ilay fanalefahana diffuser hanitra mifanaraka amin'ny HomeKit
Izahay dia nanandrana ny Vocolinc Flowerbud, fanamandoana sy diffuser ny fofona misy hazavana afaka mifehy amin'ny iPhone sy HomePod noho ny HomeKit.
Apple dia mandefa ny fonony ho an'ny iPhone SE: silicone ho an'ny € 39 ary ny hoditra ho an'ny € 49
Apple dia mandefa ny fonony ho an'ny iPhone SE: silicone ho an'ny € 39 ary ny hoditra ho an'ny € 49. Izy ireo dia efa misy ao amin'ny Apple Store amin'ny loko telo samihafa.
Araka ny voalazan'i Bloomberg, ny headphones vaovao an'i Apple dia hanana faritra magnetika
Ny headphone an'i Over-Ear any Apple ho avy dia mety manana pad sofina azo ovaina ahafahantsika manao personalize ny headphones antsika.
Eve dia manavao ny fampiharana iOS miaraka amina endri-javatra, fandaminana ary fampifanarahana vaovao
Ny fangatahana Eve hitantanana ireo fitaovana maranin'ity mpanamboatra ity dia nahazo fanavaozana fampiasa sy hatsarana lehibe.
Satechi dia nanangana tobim-piantsenana vaovao miaraka amin'ny USB-C mifangaro mba hifandray mivantana amin'ny iPad Pro na MacBook ary hampiakatra ny AirPods.
Scosche MagicGrip, mpihazona charger mandeha ho azy
Ny mpihazona charger Scosche MagicGrip dia miavaka amin'ny clamping automatique, ny fiarovana azy, ny fahamendrehan'ny charger ary ny kalitaon'ny fananganana avo dia avo.
Marshall dia mandefa ny Uxbridge vaovao miaraka amina volavola malaza sy AirPlay 2
Ny marika mpandahateny malaza Marshall dia mandefa ny mpandahateny Uxbridge vaovao miaraka amin'i Airplay 2 sy Alexa, mpanampy an'i Amazon.
Apple koa dia manavao ny HomePod amin'ny kinova 13.4
Taorian'ny fanavaozana ny fitaovana Apple rehetra, ireo tovolahy avy ao Cupertino koa dia manavao ny HomePod mankany amin'ny kinova 13.4.
iBoy, ny voninahitra tokony ho an'ny iPod
Classicbot dia mandefa saribakoly vaovao ao amin'ny Kickstarter, iBoy, izay manome voninahitra ny iPod tany am-boalohany miaraka amin'ny antsipiriany ary afaka manafatra ianao izao.
Scosche Baselynx, ny hany tokana ilaina amin'ny findainao ao an-trano
Izahay dia nanandrana ny dokam-barotra miampanga an'i Scosche Baselynx izay mamela anao hamorona dock anao manokana ho an'ireo fitaovana rehetra anananao ao an-trano.
Tady vaovao Apple Watch sy tranga iPhone
Apple dia namoaka tranga iPhone vitsivitsy sy fehy Apple Watch.
Ny Powerbeats 4 dia efa miseho amin'ny tranokala Beats ofisialy
Araka ny efa nampoizina, ny Powebeats 4 dia efa misy ao amin'ny tranokala Beats, na dia tsy azo alamina mialoha aza. Ny vidinao: 149,95 euro
Native Union Key sy Belt XL, tariby roa tena manokana
Nizaha tariby roa an'ny Vondron'olom-pirenena izahay: lakile iray izay entinao miaraka aminao, ary iray hafa izay telo metatra ny halavany mba tsy olana ny elanelan'ny plug.
Logitech dia miditra amin'ny tsenan'ny charger tsy misy tariby ho an'ny iPhone sy Apple Watch
Logitech dia manohy miloka amin'ny charger tsy misy tariby miaraka maodely telo vaovao.
AirPods Pro 'Basics' handeha hamokatra amin'ny volana aprily
Ny "Basic" AirPods Pro dia hivoaka amin'ny volana aprily. Mbola tsy fantatra ny toetran'izy ireo, saingy tsy ho ela dia hanamboarana azy ireo.
Izahay dia nanandrana ireo tranga miolakolaka ho an'ny AirPods an'ny Vondron'orinasa
Izahay dia nanandrana ireo tranga silika sy hoditra natolotry ny Native Union ho anay AirPods sy AirPods Pro, avo lenta ary misy endrika mitandrina tsara
Nomad dia manavao ny fotony famahanana mamela antsika handefa fitaovana hatramin'ny 5
Ny dock famandrihana malaza an'i Nomad, mifanaraka amin'ny Apple Watch, dia nohavaozina mba hanampiana seranan-tsambo USB roa handefasana fitaovana bebe kokoa.
Vocolinc Smart Outlet sy Power Strip, tsindrona maranitra ho an'ny HomeKit
Nodinihinay ny plug-n'ny Vocolinc izay mifanaraka amin'ny HomeKit. Kofehy misy plugina efatra sy plug iray tokana amin'ny vidiny manintona.
Ny headphones an'i Apple "Over Ear" dia hita ao amin'ny lisitry ny lisitry ny Target
Ny headphone an'i Apple eo ho eo amin'ny sofina mety ho efa niseho voalohany tamin'ny lisitr'i Target
Ny AirPods Pro Lite dia mety namely ny tsena tamin'ny antsasaky ny taona
Tsaho vaovao momba ny mety hanombohana ny AirPods Pro vaovao amin'ny kinova ekonomika misy endri-javatra vitsy kokoa
Apple dia afaka mampiasa ny teknolojia Gallium Nitride ho an'ny lozisialy manaraka amin'ity taona ity
Apple dia afaka mampiasa ny teknolojia Gallium Nitride ho an'ny lozisialy manaraka amin'ity taona ity. Miaraka amin'ity rafitra ity dia ahena antsasaky ny habeny ary ho mora ampiasaina izy io
Araka ny voalazan'i Kuo Apple dia hampitombo ny famokarana AirTags amin'ny telovolana faharoa sy fahatelo amin'ity taona ity
Eve Water Guard, Detector Leak Water mifanaraka amin'ny HomeKit
Izahay dia nanandrana ny mpamantatra ny tsiranoka Eve Water Guard, mifanaraka amin'ny HomeKit ary miaraka amina fametrahana tsotra sy mahomby
Misy ny tsaho momba ny "AirPods Pro Lite"
Ny haino aman-jery Taiwaney fanta-daza DigiTimes dia nilaza fa mety mieritreritra ny handefa ny AirPods Pro "Lite" i Apple amin'ity taona ity
Nomad Rugs Case ho an'ny AirPods Pro, amin'ny antsipiriany dia ny mahasamihafa azy
Ny Case Nomad Rugs ho an'ny AirPods Pro dia manambatra ny famolavolana, ny akora premium ary ny fikarakarana faran'izay betsaka amin'ny antsipiriany rehetra.
Samsung dia manolotra ny taranaka faharoa an'ny Galaxy Buds + misy fanatsarana lehibe
Ny taranaka faharoa an'ny headphones tsy misy tariby an'ny Samsung, Galaxy Buds, dia efa ofisialy ary manolotra antsika fanatsarana mahaliana na amin'ny feo, amin'ny bateria na amin'ny fampifanarahana.
Nahita fahalemena amin'ny fitaovana Philips Hue izay mamela ny fidirana amin'ny tamba-jotra iray manontolo
Ny jiro Philips Hue dia manana fahalemena ahafahan'ny naman'ny hafa mifehy ny takamoa, miditra amin'ny tetezana ary mankamin'ny ekipantsika.
Tranga Nomad vaovao mifanaraka amin'ny solomaso moka
Nomad dia nanangana fonosana vaovao mifanaraka amin'ny lantina Moment, fonony mamela anao hametaka ny mason'ity mpanamboatra ity
Nomad nandefa ny raharaha hoditra ho an'ny AirPods Pro
Nomad dia namoaka ny tranga vaovao hiarovany ny AirPods Pro, miaraka amin'ny hoditra manana ny toetrany Horantara ary ny fikitika manokana ny trano.
Ny iOS 13.3.1 dia misy sary miaraka amin'ny Powerbeats4 ho avy
Ny iOS 13.3.1 dia misy sary miaraka amin'ny Powerbeats4 ho avy. Izy ireo dia hitovy amin'ny Powerbeats Pro, fa ny headphone tariby, toy ny Powerbeats3, dia miraikitra.
Apple dia manomana famoahana maro ho an'ny tapany voalohany amin'ny 2020
Apple dia afaka mandefa fitaovana vaovao vitsivitsy amin'ity tapany voalohan'ny taona 2020 ity, ao anatin'izany ny iPhone mora vidy sy ny base wireless charge.
AirSnap Pro, ny fomba kanto indrindra hiarovana ny AirPods Pro
Notsapainay ny tranga roa ambin'ny folo atsimo ho an'ny AirPods Pro, fomba iray tena kanto hiarovana azy ireo sy hanakanana azy ireo tsy ho very
Nomad Base Station Stand, apetraho eo amin'ny fiainanao ny fototra mitsangana
Efa zatra miorina amin'ny tobim-pitsarana mitsivalana izahay, fa ireo mitsangana kosa dia manana tombony lehibe, ary io Nomad Base Station Stand io dia raiki-pitia.
Vica Designs tranga iPhone, mahazaka kokoa ary miaraka amin'ny atin'ny bosoa
Araraoty ny fihenam-bidy amin'ny ririnina amin'ny fonony ho an'ny iPhone avy amin'ny Vica Designs. Orinasa espaniola izay manamboatra kojakoja amina akora mendri-kaja
Original sy kopia AirPods Pro, mitovy ve ireo?
Notsapainay ny kopian'ny AirPods Pro izay mampanantena fa hitovy amin'ny tany am-boalohany, ary apetrakay mifanatrika amin'ny AirPods Pro tena izy, mendrika ve izany?
Satechi Dual Smart Outlet, toeram-pivoahana roa mifanaraka amin'ny HomeKit
Izahay dia nanandrana ny satechi dual socket mifanaraka amin'ny HomeKit izay ahafahanao mifehy azy ireo tsy miankina amin'ny alàlan'ny Siri sy ny iPhone.
Apple AirPods Mahazo 71% amin'ny vola miditra amin'ny Wireless Headphone Market
Ny AirPods an'ny Apple dia tsy amidy toa ny hotcakes ihany, fa koa mamokatra 71% amin'ny vola miditra amin'ity karazana headphone tsy misy tariby ity.
Nomad dia manolotra ny base Base fijanonana miorina amin'ny base vaovao
Nomad dia mandefa baiko vaovao BAse Station Stand izay mamela ny famerenana ny iPhone sy AirPods misy endrika mitsangana
BaseLynx no fototra famahanana modular vaovao avy amin'ny mpanamboatra Scosche
Azo ampiasaina izao ny fototra iantsoana modular Sosche vaovao
Satechi dia manome charger USB-C 108W vaovao
Satechi dia manolotra lozisialy vaovao ao amin'ny CES any Las Vegas afaka manafay ny MacBook, iPhone, iPad ary ny fitaovana hafa miaraka amintsika
Satechi dia manolotra toby famahanana telo ho an'ny iPhone, Apple Watch ary AirPods
Satechi dia nanolotra ao amin'ny rafitry ny CES 2020 any Las Vegas, toby famahanana telo izay mamela antsika hiara-hiasa amin'ny Apple Watch, AirPods ary iPhone.
Tonga ny Insta360 ONE R vaovao, ny fakantsary fihetsika vaovao miaraka amina rakipeo 360
Eto ny Insta360 ONE R vaovao, ny fakantsary modular vaovao misy fakan-tsary 3 amin'ny vatana iray: fakan-tsary 360, fakan-tsary 4K, ary iray misy sensor 1-inch,
Sonos dia nitory an'i Google amin'ny fampiasana patanty nefa tsy nandalo ilay boaty
Sonos, mpamorona mpandahateny mahay, Sonos dia nametraka fitoriana tamin'i Google, miampanga azy ho mampiasa ny patanty tsy misy fifanarahana mialoha.
ShiftCam dia tranga misy solosaina maro ho an'ny iPhone
Ny Shiftcam dia manolotra safidy hampiasa lenta fanampiny efatra amin'ny iPhone 11 mba hakanao ireo sary tena hafa ireo
Belkin dia manolotra dock famandrihana 3-in-1 ao amin'ny CES
Mandeha ny CES any Las Vegas ary iray amin'ireo izay matetika tsy mahomby amin'ny zava-baovao dia i Belkin. Amin'ity tranga ity dia manome charger 3 amin'ny 1 izy
Notsapainay ny Xtorm's EDGE izay nametraka ny HUB
Izahay dia manome anao ny vahaolana madiodio amin'ny olanao rehetra amin'ny famandrihana amin'ity Xtorm HUB ity miaraka amin'ny famandrihana haingana sy USBC PD hatramin'ny 60W.
Nanoleaf dia mandefa jiro vaovao miaraka amin'ny fianarana milina ary mifanaraka amin'ny HomeKit
Ireo tovolahy ao Nanoleaf dia mandefa takamoa vaovao mifanaraka amin'ny HomeKit izay manampy amin'ity indray mitoraka ity ny asany mba hianarany ny fahazaranay.
ZENS Liberty: toby fiampangana mitovy amin'ny AirPower izay tsy mbola hitantsika
Manomboka amidy ny tobim-pandefasana tariby tsy misy tariby ZENS Liberty 16-coil. Miaraka amin'ny famaranana roa samy hafa dia mody izy io ho AirPower izay tsy nisy namidy mihitsy
Kohler dia mandefa siramamy fandroana Smart Alexa-Compatible vaovao
Ireo olona ao Kohler dia mandray an'izao tontolo izao misy zavatra mifandraika amin'ny dingana iray lavitra miaraka amin'ny fandroana fandroana marani-tsaina izay omen'ny Alexa.
Otterbox EXO EDGE sy Symmetry, arovy ny iPhone sy Apple Watch
Nodinihinay ireo tranga Otterbox roa ho an'ny iPhone sy Apple Watch izay miaro azy ireo amin'ny vongan-dranomaso sy rano mitete mba hitazomana azy ireo ho madio.
Ubiquiti dia mandefa fonosana izay misy ny AmpliFi ALIEN Router sy ny repeater
Ubiquity dia manolotra fonosana iray misy ny router AmpliFi Alien sy mpamadika mba hizara ny tamba-jotra manerana ny tranonay tsy misy olana hafainganam-pandeha sy fahombiazana.
Azontsika atao izao ny mividy Sonos One SL sy tranga ho an'ny AirPods Pro ao amin'ny Apple Store an-tserasera
Ny katalaogy hita ao amin'ny Apple Store dia nitarina tamin'ny Sonos One SL vaovao sy tranga roa vaovao ho an'ny AirPods Pro
Anker dia mampiditra flash LED voamarina voalohany ho an'ny iPhone 11
Anker dia manolotra ny LED Flash voalohany voamarina ho an'ny iPhone 11 sy iPhone 11 Pro. Manaraka ny lalànan'ny MFI an'i Apple izy io. Azo alaina amin'ny Janoary.
Apple dia afaka nivarotra AirPod 85 tapitrisa tamin'ny taona 2020
Hatramin'ny nanombohany ny tsena ny volana desambra 2016, ny AirPods dia tsy vitan'ny hoe lasa referansa ao anatin'ny ...
Ny AirPods Pro dia manatsara ny fahantrana amin'ny maodely teo aloha
Ny AirPods Pro vaovao dia manana latency tsara noho ny AirPods faharoa ary tsara lavitra noho ny an'ny taranaka voalohany.
Ekster, ny kitapom-bola tsy ho resinao mandrakizay
Notsapainay ny Ekster Parliament, poketra vita amin'ny hoditra voajanahary izay mampiditra ny teknolojia fiarovana RFID farany sy ny rafitra mpanara-maso.
Ny fanomezana 5 tsara indrindra homena ny mpankafy Apple
Raha tsy fantatrao izay homena amin'ity Noely ity, dia misy fanomezana 5 mety tsara ho an'ny mpankafy Apple rehetra. Marina ny anao!
Ireo no tranga OtterBox vaovao ho an'ny iPhone 11
OtterBox sy PopSockets dia nanangana tranga grippy mifanaraka amin'ny iPhone 11 vaovao ary misy amin'ny loko manaitra 4.
Ny AirPods dia mety nahatratra 4 miliara dolara, nihoatra ny data fivarotana tsara indrindra amin'ny iPod
Apple dia tokony ho nihoatra ny tampon'ny varotra iPods amin'ny AirPods vaovao izay tokony handalo 4 tapitrisa dolara amin'ny marika.
Tranga ESR ho an'ny AirPods Pro anao: fiarovana nefa tsy hitanao
Na noho ny antony hatsarana, ny manome fanovana loko, na ho fiarovana, mety ho hevitra tsara ny fametrahana sarony amin'ny AirPods Pro anao.
Classicbot dia manome antsika vatosoa roa ho an'ny mpankafy Apple
Classicbot dia namorona kilalao kely roa izay ho tian'ny mpankafy Apple, kopian'ny vokatra roa toy ny Macintosh sy iMac G3
Apple dia manomana headphone Powerbeats4 vaovao miaraka amin'ny fanohanan'ny "Hey Siri"
Apple dia mety mieritreritra ny hanitatra ny isan-karazan-telefaona Beats amin'ny alàlan'ny fandefasana Powerbeats4 vaovao izay mitondra azy ireo ny lahasa "Hey Siri".
Iray amin'ireo AirPod roa tsy mandeha? Raiso moramora fa misy vahaolana
Iray amin'ireo AirPod roa tsy mandeha? Aza matahotra fa misy vahaolana io. Indraindray dia mitranga izany. Misy ifandraisany amin'ny fifandraisana tsy misy tariby.
Mazava ho azy fa misy jiro marani-tsaina tonga eo amin'ny hazo Noelinao
Twinkly dia manome kitapo fanaovan-jiro isan-karazany ho an'ny hazo krismasy miaraka amina dingana tsotra sy valiny mahatalanjona.
Nilaza ny mpandinika fa mety nivarotra AirPod 3 tapitrisa i Apple nandritra ny Zoma Mainty
Ny herinandro naharetan'ny Black Friday dia namela ilay orinasa monina ao Cupertino hametraka AirPod mihoatra ny 3 tapitrisa.
AirPods mitondra tombony tsara indrindra amin'ireo mpamatsy aziatika Apple
Apple dia mety ho lasa mpanjifa tsara indrindra ho an'ireo mpamatsy AirPods any Azia noho ny habetsaky ny orinasa omen'ny AirPods azy ireo
Fanadihadiana ny tranga Smart Battery vaovao ho an'ny iPhone 11 Pro Max
Izahay dia mamakafaka ny Smart Battery Case ho an'ny iPhone 11 Pro Max, miaraka amin'ny fahaleovan-tena 50% bebe kokoa ho an'ny iPhone ary bokotra iray ho an'ny fakantsary.
Vidio iPhone ary alao miaraka amin'ny AirPods
Nilaza i DigiTimes fa afaka manampy AirPods miaraka amin'ny iPhones i Apple amin'ny taona manaraka. Tsaho miverimberina izay antenainay fa herintaona no ho tanteraka
Ny fikafika tsara indrindra ho an'ny AirPods Pro
Asehonay anao ny zavatra rehetra azonao atao amin'ny AirPods Pro, mba hahafahanao manararaotra ny fiasan'ireo headphones mahafinaritra rehetra ireto.
Ny varotra tsara indrindra amin'ny kojakoja ho an'ny Black Friday
Safidinay ny tolotra tsara indrindra amin'ity zoma mainty ity amin'ny kojakoja sy vokatra mifandraika amin'ny iPhone, iPad ary Mac, mba tsy ho lasa adala ianao
UAG sivily, fanatsarana bebe kokoa, fiarovana avo indrindra ho an'ny iPhone
Ireo tranga sivily vaovao avy amin'ny Urban Armor Gear dia manome fiarovana kilasy miaramila ho an'ny iPhone, miaraka amina endrika voadio kokoa
AirFly Pro, hahafahanao mampiasa ny AirPods amin'ny fitaovana rehetra
Miaraka amin'ny AirFly Pro dia azonao atao ny mampiasa headphone Bluetooth hatramin'ny roa miaraka amina fitaovana misy output audio jack
Ny vinavinan'i Bloomberg ho an'ny fandefasana AirPods mitombo
Ny fivarotana AirPods araka ny Bloomberg dia mahatratra isa lehibe ho an'i Apple. Ho fanampin'izay, azo atao kokoa ny manohy mitombo
Nuki, ny hidy marani-tsaina mifanentana amin'ny HomeKit
Notsapainay ny hidy Nuki marani-tsaina, mifanaraka amin'ny HomeKit, Alexa ary Google Assistant, miaraka amina fametrahana tsotra be ary tsy manova ny hidin-trano voalohany
Ny The South South AirFly Pro dia misy ao amin'ny Apple Store izao
Ny AirFly Pro, ny laharana faharoa AirFly natombok'i Second South tamin'ny taon-dasa, dia misy ao amin'ny Apple Stores erak'izao tontolo izao.
Fonon-tànana vaovao Mujjo, mba tsy hamela anao tsy misy iPhone ny sery
Mujjo dia manavao ny fonon-tànany mpanao fanatanjahan-tena mba hanampiana fiarovana fanampiny amin'ny hatsiaka, hitazonana ny fananan'izy ireo tsy miovaova.
Catalyst Impact Protection, ny tranga ho an'ny mavitrika indrindra
Catalyst Impact Protection Case dia iray amin'ireo tranga izay manome fiarovana lehibe kokoa miaraka amin'ny fanovana kely ny famolavolana ny iPhone
Aza mamoy ny fanananao intsony amin'ny Tile sy ny mpanaraka azy
Notsapainay ny Tile Pro sy ny sticker hafa, safidy roa hafa mba tsy hahavery anao izay ilainao loatra ary hadinonao foana.
Famerenana ny tranga hoditra Mujjo ho an'ny iPhone 11 Pro Max
Izahay dia nanandrana tranga hoditra Mujjo ho an'ny maodely iPhone vaovao, ny safidy tsara indrindra amin'ny tranga Apple ofisialy
Ity no ho dingam-pandaminana ny Apple AirTags vaovao
Alohan'ny hanombohan'ny Apple AirTags tsy ho ela dia fantatsika izao ny fizotran'ny fikirakirana ny AirTags amin'ny alàlan'ny iPhone.
iFixit manapaka ny AirPods Pro vaovao ary hitantsika ao anatiny
Ny fanapotehana ny AirPods Pro vaovao avy amin'i iFixit dia mampiseho izay efa fantatray fa tsy azo amboarina izy ireo raha misy olana
AirPods Pro, ny headphones vaovao tokony hokapohina
Ny AirPods, ny bestseller an'i Apple tato anatin'ny taona vitsivitsy, dia nahita mpifaninana henjana, fa ...
AirPods Pro dia mahatohitra rano, amin'ny fepetra ahoana?
Ankehitriny ianao dia afaka mahazo ny AirPods Pro vaovao, headphone tsy misy tariby vaovao izay mitondra fanoherana rano sokajy IPX4 ankehitriny.
Ity no vidin'ny fanoloana AirPod Pro raha sanatria very
Ireo ny vidiny takian'i Apple amin'ny fanoloana ny iray amin'ireo AirPods Pro vaovao raha sanatria misy fatiantoka na tsy fahombiazan'ny fiantohana.
Isan'andro - New AirPods Pro, iOS 13.2 ary HomePod
Ny tena mampiavaka ny AirPods Pro vaovao sy ireo fiasa vaovao izay mitondra ny fanavaozana ny iOS 13.2, iPadOS 13.2 ary ho an'ny HomePod.
Sary misimisy kokoa momba ny boaty fiasan'ny AirPods misy fanafoanana ny tabataba
Sary vaovao momba ny boaty fitoeran'ny AirPods an'ny taranaka fahatelo miaraka amin'ny rafitra fanafoanana ny tabataba.
UAG Monarch, ny hatsarana sy ny bibidia amin'ireo tranga ho an'ny iPhone-nao
UAG Monarch dia manambatra vy, hoditra ary plastika amin'ny famaranana kilasy voalohany, hahazoana fiarovana avo lenta ho an'ny iPhone.
BookBook for iPhone 11 Pro Max: manatsara klasika
Notsapainay ny tranga BookBook ho an'ny iPhone 11 Pro Max, fonosana kitapom-batsy avo lenta vita amin'ny hoditra ary be dia be miaro ny fitaovanao.
Eve Energy Strip, tady marani-tsaina hafa
Izahay dia nisedra ny tadin'ny herinaratra Eve Energy Strip, miaraka amina endrika premium, fampidirana HomeKit ary ny fepetra fiarovana rehetra ho an'ny fitaovanao.
Anker Soundcore Flare +, hazavana sy hery ho an'ny mozikanao
Notsapainay Anker's Soundcore Flare + Bluetooth mpandahateny, miaraka amin'ny fahaleovan-tena tena tsara, jiro LEd, ary hery sy bas mahafinaritra.
Sonos Move, izay rehetra azonao angatahina amin'ny mpandahateny iray
Notsapainay ny Sonos Move vaovao, mpandahateny feno indrindra eny an-tsena izay manambatra ny kalitaon'ny feo sy ny fahafaha-mitondra, ny mpanampy virtoaly, ny WiFi ary ny Bluetooth.
Hoditra sy fiarovana ho an'ny iPhone miaraka amin'ny Nomad
Notsapainay ny tranga hoditra Nomad Rugs Case ary ny Case Rugs Case, izay miaro anay amin'ny famolavolana premium
Telegrama USB-C Nomad, androm-piainany
Nodinihinay ireo tariby USB-C Nomad, miaraka amin'ny firaketan'i Kevlar ary antoka 5 taona, ary koa ny fanamarinana an'i Apple.
Surface EarBuds, ny fanoloana vaovao an'ny AirPods an'ny Microsoft
Ny fanoloran-tenan'i Microsoft amin'ny headphones tsy misy tariby dia antsoina hoe Surface EarBuds ary manome endrika hafa tanteraka izy noho ny fanarahan'ny ankamaroan'ny mpanamboatra azy.
Canvas Nanoleaf, haingo ary fampiasa amin'ny faritra mitovy
Notsapainay ny iray amin'ireo kojakoja indrindra HomeKit, singa haingon-trano izay mihamaro ny fampiasana azy
Aukey dia manolotra lozisialy marani-tsaina 5 vaovao ho an'ny iPhone sy MacBook
Raha te hanararaotra ny famandrihana haingana amin'ny iPhone ianao dia tadiavo ireo charger Aukey miisa 5 misy seranana USB maromaro sy Detect Dynamic
Ny kaody IOS 13.1 dia manambara tranga Smart Battery ho an'ny iPhone 11, Pro ary Max
Ao amin'ny Apple dia afaka nanomana ny tranga bateria vaovao Case Smart Battery ho an'ny iPhone 11, iPhone 11 Pro ary iPhone 11 Pro Max izy ireo
Ny AirPods an'ny taranaka fahatelo dia tsy handeha hamokatra hatramin'ny Oktobra
Araka ny DigiTimes, ireo AirPod vaovao dia tsy handeha hamokatra raha tsy amin'ny volana oktobra ho avy izao, noho izany dia arianay amin'ny fitsipika izy ireo anio
Ny iPhones vaovao 2019 dia hametaka coprocessor sensor R1 antsoina hoe "Rose"
Ny iPhones vaovao 2019 dia hametraka coprocessor sensor vaovao R1 antsoina hoe "Rose" hitantanana angona avy amin'ny sensor sy ny habakabaka rehetra
Fresh'n Rebel Twins, manandrana manatsara ny toerana ialan'ny AirPods
Fresh'n Rebel dia mandefa ny headphones Twins True Wireless vaovao hijoroany amin'ny AirPods, miaraka amin'ny loko maro sy vidiny mifaninana tokoa.
Tanana volamena Apple Card ho an'ny olona an-tapitrisany
Tranga iray ho an'ny Apple Card vita amin'ny volamena izay mitentina arivo Euros
Xiaomi's Yeelights dia mifanaraka amin'ny AppleK HomeKit
Ireo tovolahy ao Xiaomi dia manaraka ny fangatahana ary manao ny jirony maranin-tsaina Yeelight hifanaraka amin'ny HomeKit an'ny APple.
Insta360 dia mandefa ilay 'Go' vaovao, fakan-tsary mihetsika miorina tsara indrindra eny an-tsena
Ny marika fakantsary malaza 360 Insta360 dia mandefa ny fakantsary hetsika Insta360 GO vaovao, fakantsary milanja 18.3 grama fotsiny ary mitovy habe amin'ny rantsantanana iray.
Amin'ireto tranga ireto dia azontsika atao manokana ny miaro ny AirPods
Ny doka Apple ao amin'ny tranonkala Koreana dia mampiseho amintsika ny fomba rehetra hiarovana ny boaty amin'ny AirPods
Ny Nike Adapt Huarache vaovao dia manenjana na mamaha amin'ny fampiasana Siri
Nike dia nanolotra ny Nike Adapt Huarache vaovao. Ireo an'ny Nike ireo dia azo henjana na halefaka mivantana avy amin'ny mpanampy Siri
Ny AirPods dia tsy mahazo ny tolo-kevitry ny Consumer Report, zavatra iray izay ataon'ny Galaxy Buds
Araka ny Consumer Reports, ny taranaka faharoa an'ny AirPdos an'ny Apple dia betsaka noho ny an'ny Galaxy Galaxy Buds ary tsy mahavita fanamarinana.
Famerenana ny kabary SYMFONISK avy amin'ny IKEA sy Sonos
Notsapainay ireo mpandahateny vaovao SYMFONISK, vokatry ny fiaraha-miasa teo amin'ny IKEA sy Sonos, ary manome feo tena tsara izy ireo amin'ny vidiny mirary tokoa
OtterBox dia manolotra Dock Port-Wireless Charging Wireless ho an'ny iPhone
Ny mpanamboatra tranga fiarovana ho an'ny iPhone, dia nanolotra toby fikirakirana finday vaovao tena manify sy stackable.
AirSnap Twill avy amin'ny South South, dia nosedraina ny tranga AirPods faran'izay tsara
Ny South South dia orinasa natokana ho an'ny kojakoja fampiasa amin'ny kalitao, amin'ny ankapobeny vita amin'ny hoditra, ho an'ny vokatray ...
Ny Powerbeats Pro dia misy amin'ny loko Ivory, Moss ary Navy ankehitriny
Apple dia efa mamela antsika hividy Poiwerbeats Pro vaovao any Ivory, Moss ary Navy Blue, tsy amin'ny mainty toa azy ireo ihany hatramin'ny nanombohany.
Araraoty ny fihenam-bidy amin'ny vokatra an-trano avy any Koogeek
Jereo ny fotoana voafetra atolotra amin'ny kojakoja mandeha ho azy ao an-trano avy any Koogeek: tsipika maranitra, fantsona LED, tariby herinaratra, sensor ary maro hafa!
Mpanamboatra tranga dia manantena pensilihazo kely Apple ho an'ny iPhones 11 ho avy
IKEA dia miomana hampitombo ny fampiasam-bola amin'ny fitaovana miaraka amin'ny HomeKit
Mazava ny tovolahy ao IKEA: miroborobo ny tsenan'ireo fitaovana an-trano an-trano ary te-hanohy hampiasa vola amin'ny HomeKit ...
Maninona aho tsy manoro hevitra anao hividy ny stabilizer DJI Osmo Mobile 3 vaovao
Vao avy nandefa ny DJI Osmo Mobile 3 vaovao i DJI, ny stabilizer marika vaovao izay tsy amporisihinay anao hividy.
Sonos dia miomana ny handefa mpandahateny portable miaraka amin'ny Bluetooth sy AirPlay 2
Sonos dia miomana ny hampiditra ny mpandahateny portable voalohany amin'ny Bluetooth sy AirPlay 2 amin'ny alàlan'ny Wi-Fi amin'ny herinandro ho avy.
Apple mandefa adaptatera USB-C multiport vaovao miaraka amin'ny HDMI
Ireo tovolahy avy ao Cupertino dia mandefa kinova avao amin'ny adaptatera AV miaraka amin'ny HDMI hitondra HDR10 sy Dolby Vision.
Raha manolo ny batterieo an'ny iPhone amin'ny iray tsy izy ianao dia very ny fampahalalana momba ny fahasalamany
Apple dia nanetsika rafitra iray ao amin'ny iOS mba "hanoro hevitra" ny mpampiasa hampiasa bateria voalohany rehefa manapa-kevitra ny hisolo ny ...
Withings dia mandefa mpanara-maso tosidra vaovao mifandray amin'ny iPhone
Withings dia mandefa mpanara-maso tosidra vaovao mifandraika amin'ny iPhone, ny iray amin'izy ireo dia misy electrocardiogram sy stethoscope nomerika
Netro Whisperer, ny sensor tsara indrindra hikarakarana ny zaridainanao
Netro Whisperer dia mari-pana amin'ny mari-pana, ny hamandoana ary ny tara-masoandro izay hanampy ny tobin'ny rano fisotroan'ny Netro Sprite hahomby kokoa.
Eve Extend, manitatra ny tratran'ny fitaovanao Eve HomeKit
Eve dia nanangana an'i Eve Extend, tetezana ho an'ny kojakoja Eva izay mamela azy ireo hapetraka lavitra ny foibe fametahana HomeKit noho ny fifandraisana WiFi.
Ny iPhones manaraka dia mety manana fanohanana ny Apple Pencil
Mpanolo-tsaina maro no milaza fa ny Apple Pencil dia hifanaraka amin'ireo iPhones 2019 izay hatombok'i Apple amin'ny volana septambra.
Satechi M1, totozy iray ho an'ny iPad sy Mac anao amin'ny fomban'ny Apple
Satechi dia nandefa totozy vita amin'ny aliminioma, miaraka amina endrika tena tsara, habe mety tsara hitondrana azy na aiza na aiza ary miaraka amin'ny bateria azo averina indray amin'ny alàlan'ny USB-C
FamilyCharger dia charger tokana ho an'ny fitaovana dimy miaraka
Elevation Lab dia nanana hevitra tsara izay nanomboka nivarotra charger mahery tamin'ny tariby afaka mamaky fitaovana enina indray mandeha.
Ny fifanarahana HomeKit tsara indrindra amin'ny Amazon Prime Day
Izahay no manao ny safidy tsara indrindra ho an'ny vokatra mifanaraka amin'ny HomeKit izay hamidy mandritra ny Andro voalohan'ny Amazon anio
Ny fifanarahana tsara indrindra amin'ny Amazon Prime Day (15 Jolay)
Misafidy ny tolotra Amazon Prime Day tsara indrindra amin'ny vokatra Apple, kojakoja ary marika teknolojia hafa izahay amin'ny ankapobeny
Amazon dia mikasa ny hanangana Echo vaovao izay mifaninana amin'ny HomePod amin'ny kalitaon'ny feo
Amazon dia te handefa mpandahateny manana kalitaon'ny feo ampy hifaninanana amin'ireo mpandahateny HomePod sy Sonos an'ny Apple
Ny Powerbeats Pro vaovao dia efa misy any Espana
Ny Apple Powerbeats Pro vaovao miaraka amin'ny puce H1 dia azo vidiana any Espana ankehitriny, natao ho an'ny fanatanjahan-tena ary miaraka amina cas-charger.
tadoº Smart AC Control, fehezo ihany ny farany amin'ny aircon amin'ny HomeKit
Ny fifehezana ny rivotra amin'ny alalàn'ny HomeKit na sehatra automatique an-trano hafa dia azo atao amin'ny alàlan'ny tado AC Smart AC Control V3 +
Ikea dia manavao ny isan'ireo jiro TRADFRI mifanaraka amin'ny HomeKit
Ikea dia manavao ny isan-karazany ny takamoa marani-tsaina, iray amin'ireo mora indrindra eny an-tsena, TRADFRI mifanaraka amin'ny HomeKit an'ny Apple.
Eva hanangana fanitarana Bluetooth mifanaraka amin'ny HomeKit amin'ny volana septambra
Miomana ny handefa Bluetooth extender ho an'ny fitaovana Apple HomeKit-dry zareo ry zalahy ao amin'ny Eve.
Elago's Apple Watch Charging Stand in the Shape of iPod is Beautiful Beautiful
Rehefa tonga ny Apple Watch dia maharitra fotoana fohy vao tsapantsika fa tsy maintsy mila mahazo ...
Legrand dia mandefa karazana switch vaovao ho an'ny HomeKit nefa tsy mila hub izany
Ireo tovolahy ao Legrand dia manaraka ny dian'ny Philips amin'ny alàlan'ny fandefasana switch vaovao mifanaraka amin'ny HomeKit izay tsy mila Hub hifaneraserana.
Philips Hue dia mandefa ny bulbs smart Bluetooth voalohany, tsy mila ilay tetezana
Philips Hue dia nandefa ny jiro voalohany tamin'ny Bluetooth mba hanadinoantsika ireo tetezana ary hahafahantsika mifehy azy ireo amin'ny fitaovantsika.
Trangam-batterie Mophie vaovao miaraka amin'ny fifandraisana misy taratra sy ny famahanana tariby
Mophie dia nanolotra tranga vaovao momba ny bateria sy tsy misy tariby miaraka amin'ny fifandraisana misy tselatra mifanaraka amin'ny iPhone XS, iPhone XS Max ary iPhone XR
Yi Home Camera 3, fakan-tsarimihetsika vaovao an-trano matanjaka kokoa
Notsapainay ny fakantsary Yi Home fiarovana vaovao anaty trano, miaraka amin'ny rafi-pitsikilovana artifisialy hisorohana ny fanairana diso.
HiRise Wireless avy amin'ny South South, ilay charger 2-in-1 tonga lafatra
Toro-làlana roa ambin'ny folo atsimo dia manome antsika ny charger HiRise Wireless vaovao izay manambatra ny tombotsoan'ny charger amin'ny birao miaraka amin'ny fahaizan'ny marindrano sy azo entina.
Mophie's Powestation Hub dia mamela antsika hiampita fitaovana efatra miaraka
Ny Hub Mofon-herin'i Mophie dia mamela antsika hiara-hiasa amin'ny fitaovana efatra miaraka amina fitaovana iray.
Finday Alubase fotsiny, ny charger tsy misy tariby ho an'ny biraonao
Just Mobile dia manolotra antsika toby famahanana Alubase miaraka amina endrika izay mitambatra tanteraka amin'ny vokatra Apple, sy ny kalitao ambony
Netro Sprite, mpanara-drano fanondrahana manan-tsaina
Netro Sprite dia mpandrindra fanondrahana manan-tsaina, miaraka amin'ny safidy fanamboarana maro izay ahafahanao manana ny zaridainao tonga lafatra ary mamonjy rano koa.
HomeKit ity sy ny fampiharana Home ao amin'ny iOS 13
Notsapainay ny fampiharana HomeKit sy ny Home ao amin'ny iOS 13 miaraka amin'ireo fanovana nampidirin'i Apple tao amin'ity kinova vaovao ho an'ny iPhone ity.
Voamarina: Tonga ny volana aogositra ny jamba mahiratra Ikea's HomeKit
Ny jamba maranitra KADRILJ sy FYRTUR mifanentana amin'ny HomeKit avy any Ikea dia voamarina fa hamely ny tsena amin'ny volana aogositra ho avy izao.
Araraoty ny famerenam-bola haingana amin'ireo charger USB-C Hama ireo
Hama dia manome lozisialy USB-C roa ho an'ny iPhone miaraka amin'ny herin'ny 18W ho an'ny faladiany rindrina sy ho an'ny fiara
Mophie dia mandefa karazana powebanks vaovao ho an'ny iPhone sy iPad
Ny mpanamboatra ny powerbanks Mophie dia nanolotra ny elanelam-pahefana vaovao miaraka amina endrika, loko ary fahaiza-manao vaovao.
Powerbeats Pro dia azo alamina mialoha amin'ny 31 May any UK, France ary Alemana
Ny Powerbeats Pro vaovao dia ho tonga any Eropa amin'ny 31 Mey, na dia any Angletera, Frantsa ary Alemana ihany. Ho tonga any Espana izy ireo amin'ny volana Jona.
Izahay dia mamakafaka ny fakantsary fanaraha-maso Ezviz CTQ6C
Izahay dia mamakafaka ny fakantsary fanaraha-maso Ezviz CTQ6C, fakantsary amin'ny vidiny izay mihoatra noho ny fanitsiana ireo endri-javatra marobe omeny anay.
Tado manavao ny fitaovana famindrana rivotra malaza lavitra miaraka amin'ny fampifanarahana HomeKit
Ireo tovolahy ao Tado dia namoaka fanavaozana ny fanaraha-maso ny HVAC Control ho an'ny aircon, V3 izay mitondra antsika ho HomeKit.
Sonos dia nanampy an'i Google Assistant ho an'ireo mpandahateny any Etazonia
Sonos dia nanampy an'i Google Assistan amin'ny lisitry ny mpanampy virtoaly mifanaraka amin'ny mpandahateny azy, any Etazonia ihany izao
Ring Doorbell Pro sy Spotlight Cam vokatra ho homeKit mifanentana aorian'ny fampanantenanao an-taonany maro
Ny roa amin'ireo vokatra malaza indrindra an'ny Ring, ny Doorbell sy ny Spotlight Cam, dia tsy ho ela dia hahazo fanavaozana mba hampifanaraka azy ireo amin'ny HomeKit.
Tsy mandrakotra matetika ny fonony ary amin'ity tranga ity dia asehon'izy ireo amintsika ny endrik'ilay iPhone manaraka
Ireo mpanamboatra fitaovana mazàna dia mamolavola fitaovana alohan'ny fotoana ary izany dia mahatonga ny famoahana ny famoahana endrika.
Powerbeats Pro dia misy fanoherana ny rano IPX4
Apple dia nampifantoka ny elanelan'ny Powerbeats amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena, ary nitondra izany tamin'ny fanehoana farany ambony tamin'ny ...
Mpanamboatra tranga UAG dia mandefa ny tadiny Apple Watch roa voalohany
Ny mpanamboatra tranga ho an'ny iPhone sy iPad dia nanolotra tamin'ny fomba ofisialy izay ho tadiny roa voalohany ho an'ny Apple Watch
Ny mpanamboatra AirPods dia mampitombo ny famokarana hamaly ny fangatahana avo
Araka ny voalazan'ny DigiTimes, ny mpamatsy singa an'ny Apple dia nampiakatra ny tahan'ny famokarana mba hamaly ny fangatahana avo lenta amin'ny AirPods 2
Famakafakana ny NOMAD Base Station, ny charger tsy misy tariby izay mifanila amin'ny fahalavorariana
Notsapainay ny toby famahanana NOMAD Base Station Apple Watch Edition, toby famahanana premium izay ahafahanao mameno ny iPhone, Apple Watch ary AirPods.
Raha atelinao ny AirPods dia mety ho velona izy ireo
Mpampiasa iray any Taiwan no nitelina ny AirPod raha natory niaraka tamin'izy ireo tamin'ny. Raha vantany vao nahavita namoaka azy io tamin'ny vatany izy dia niasa lavorary
IPhones amin'ity taona ity dia hanampy charger USB C 18W
Apple dia afaka manampy charger USB C 18W amin'ny iPhones amin'ity taona ity. Ny mpanelanelana Mac Otakara dia manazava izany amin'ny fanambarana iray
Logitech Slim Folio Pro, ny famenony tsara indrindra ho an'ny iPad Pro
IPad Pro tsy misy kitendry very fahatsapana betsaka, ary ny fonony fitendry izay omen'i Logitech anay dia manambatra tanteraka ny fiarovana sy ny kitendry backlit
Just Mobile mandefa ny lozisialy Wireless Encore Wireless amin'ny Kickstarter
Just Mobile dia manolotra antsika tobim-pandefasana charger vaovao misy fiakarana mihodina sy porta USB roa fanampiny, azo jerena ao amin'ny Kickstarter.
Kuo miloka amin'ny maodely AirPods roa amin'ny faran'ny taona
Nanazava tamin'ny haino aman-jery ny mpandalina iray mampiady hevitra Ming-Chi Kuo fa hanana maodely roa samy hafa amin'ny AirPod isika amin'ny faran'ity taona ity.
Soma Smart Shades, fehezo ny lambam-baravaranao sy ny ambainanao amin'ny alàlan'ny HomeKit
Hodinihinay ny Soma Smart Shades, miaraka amin'ny Soma Connect, ny fomba tsara indrindra hifehezana ny lambam-baravarankely sy ny lambam-baravarana amin'ny HomeKit.
OtterBox dia mandefa fonony manintona miaraka amin'ny endrika isan-karazany ho an'ny iPhone
Ireo tovolahy ao amin'ny OtterBox dia manavao ny isan'ireo tranga iPhone misy karazany efatra vaovao izay miaro sy mahatonga antsika hanana ny fitaovantsika amin'ny lamaody.
Ireo atleta dia mampiasa Powerbeats Pro
Beats mandefa doka vaovao mampiseho atleta matihanina samihafa amin'ny fampiasana Powerbeats Pro
Izahay dia nanandrana ny Xtorm Fuel Series 3 miaraka amin'ny Power Delivery, ampandoavina antsasak'adiny ny fitaovanao
Izahay dia nanandrana ny Xtorm Fuel Series 3 vaovao, ampandehanana antsasaky ny adiny ny fitaovanao noho ny Fandefasana Power natolotry USB-C.
Libratone ZIPP2, mpandahateny amin'ny zavatra rehetra azonao angatahina
Izahay dia mamakafaka ny iray amin'ireo mpandahateny feno indrindra eny an-tsena: azo entina, miaraka amin'ny fizakan-tena 12 ora, AirPlay 2, feo tsara, endrika tsara, fifandraisana Jack sy USB, Bluetooth ... Sarotra ny mangataka bebe kokoa.
Tetika 10 hahazoana tombony betsaka amin'ny AirPods anao
Manazava fika 10 izay ahazoanao tombony betsaka amin'ny AirPods anao izahay, avy amin'ny fomba handrenesana hoe iza no miantso anao hampiasa azy ireo amin'ny telefaona Android anao.
Apple dia mampihena ny vidin'ny HomePod manerantany
Tao anatin'ny hetsika tsy fahita firy, Apple dia nanapa-kevitra ny hampihena ny HomePod manerantany fa tsy misy fiovana hita eo imasony.
Powerbeats Pro no hafa amin'ny AirPods izay mety andrasanao
Apple dia nanambara ny Powerbeats Pro, headphone natao ho an'ny fanatanjahan-tena fa mitazona ny fotony izay nahatonga ny AirPods hahita fahombiazana.
Mophie Powerstation PD, mamarana haingana dia mahatratra batterie ivelany
Mandinika ny mofie Powerstation PD izahay, bateria ivelany 6700mAh misy fiampangana haingana ary heriny hatramin'ny 18W amin'ny lanja 150g fotsiny
Nanidy ny orinasan-doha maranitra i Bragi
Ny orinasa Bragi dia manidy orinasa amin'ny alàlan'ny fivarotana orinasa Smart Headphone
Izahay dia mamakafaka ny fakantsary Insta360 One X, fakan-tsary 360 mahavariana
Nodinihinay ny fakan-tsary Insta360 One X, izay manambatra fitaovana tsara sy rindrambaiko fanovana tena tsara hahazoana valiny mahatalanjona.
Tsy hahatratra ny tsena ny tobim-panafarana AirPower: Nofoanan'ny Apple ny fivoarany
Herintaona sy tapany taorian'ny nanambarana ny tobim-pandefasana tsy misy tariby antsoina hoe AirPower dia nanapa-kevitra ny hanafoana ity tetikasa ity i Apple ary tsy hahita ny hazavan'ny andro intsony.
Manadihady ireo AirPod vaovao isika: manatsara ny sarotra hatsaraina
Izahay dia mamakafaka ireo AirPod vaovao izay tonga miaraka amina fiasa vaovao toy ny famahanana tsy misy tariby, Hey Siri ary ny feo nohatsaraina
Ny kaody iOS 12.2 dia mampiseho antsika hoe hanao ahoana ny Powerbeats Pro
Amin'ny famoahana ny iOS 12.2, ao amin'ny kaody ny fanavaozana ny iOS vaovao dia ho hitanao ny sarin'ilay Powerbeats Pro.
Ny tobin'ny AirPower dia tsy halefa hatramin'ny faran'ny volana martsa
Tsaho vaovao milaza fa ny tobim-piantsonana AirPowerno efa nandrasana hatry ny ela dia havoaka amin'ny fomba ofisialy hatramin'ny faran'ity volana ity.
Raffle roa tranga Mujjo hoditra ho an'ny iPhone manerana izao tontolo izao
Raffle roa tranga Mujjo hoditra ho an'ny iPhone, ary afaka mandray anjara na aiza na aiza eto amin'izao tontolo izao. Te hahazo iray ve ianao? Ampidiro ary araho ireto dingana ireto
Tady vaovao ho an'ny Apple Watch ary tranga vaovao ho an'ny iPhone Aza ajanona ny fety!
Apple dia manohy ny herinandro fandefasana azy ary manavao ny tranonkala miaraka amin'ny loko vaovao ho an'ny tadiny Apple Watch ary misy tranga maro ho an'ny iPhone
Mitentina 89 euro ny boaty famandrihana tsy misy tariby amin'ny AirPods
Rehefa afaka herintaona mahery ny fiandrasana, ny AirPods faharoa misy famahanana tsy misy tariby dia hita ao amin'ny Apple Store izao.
AirPods no headphone tsy misy tariby tian'ireo mpampiasa fa tsy noho ny kalitaon'ny feo
Ny fanadihadiana dia mampiseho ny safidin'ny ankamaroan'ny mpampiasa finday tsy misy tariby ho an'ny AirPod na dia tsy noho ny kalitaon'ny feo aza.
Voamarina: Apple dia hanangana AirPods sy iPads vaovao amin'ny 25 martsa
Miomana ny tovolahy avy any Cupertino ka amin'ny 25 martsa ho avy izao dia hanana AirPod vaovao sy iPad vaovao isika, afaka mividy azy ireo amin'ny 29 martsa izao.
Bnext, karatra tsy misy komisiona ary fehezin'ny findainao
Manolotra anao karatra mialoha i Bnext azonao ampiasaina tsy misy kaomisiona, manala vola amin'ny ATM rehetra ary mandoa vola any ivelany amin'ny vola hafa
UAG Metropolis, fiarovana feno ho an'ny iPad Pro
Notsapainay ny tranga Urban Armor Gear Metropolis, iray amin'ireo safidy tsara indrindra ho an'ireo izay mitady fiarovana tanteraka ho an'ny iPad Pro.
Ahoana ny famerenana amin'ny laoniny ny AirPods sy ny fanamboarana ny olan'ny fifandraisana
Raha nanomboka nampiseho olana amin'ny fifandraisana ny AirPods anao, ny tsara indrindra azontsika atao dia ny mamerina azy ireo ary avelao izy ireo ho toy ny vao novidiana.
AMPLIFI Instant, tambajotra MESH tsara ho an'ny tranonao
Manadihady ny AMPLIFI Instant, ny vahaolana vaovao avy amin'ny Ubiquiti Networks izahay hanadinoana indray mandeha ny olan'ny fandrakofana Wi-Fi ao an-trano
Ahoana ny fanitsiana ny "Miala tsiny, misy olana, andramo indray" miaraka amin'ny HomePod sy Siri
Nahita vahaolana vonjimaika amin'ny tsy fahombiazan'i Siri izahay na dia manatanteraka ny baiko aza izany dia milaza aminay fa nisy ny tsy fahombiazana ary tsy afaka.
Wynd Plus mpanadio rivotra mifanaraka amin'ny iOS
Apple dia manana kojakoja vaovao ao amin'ny tranonkala, izy io dia mpanadio rivotra antsoina hoe Wynd Plus. Azonao atao ny mitondra an'io manadio io na aiza na aiza
Eve Light Strip, ny tarika LED mamirapiratra indrindra ho an'ny HomeKit
Izahay dia mamakafaka ny LED eve Light Strip, ny mazava indrindra eny an-tsena mifanentana amin'ny HomeKit ary afaka 10 metatra miaraka amin'ny fifandraisana WiFi.
Satechi 75W Dual USB-C, ilay mpifaninana All-in-One
Izahay dia mamakafaka ny iray amin'ireo mpamadika finday feno indrindra izay azonao jerena eny an-tsena, miaraka amin'ny herin'ny 75W sy ny famoahana herinaratra USB-C roa
Mihaino radio amin'ny HomePod
Azavainay ny dingana tokony harahinao mba hahafahanao mihaino radio amin'ny HomePod anao, misafidy ny gara tianao ary mampiasa ny feonao fotsiny.
Ahoana ny fampiasana HomePod tsy misy fifandraisana WiFi
Ny HomePod dia mpandahateny amin'ny farany ary azo ampiasaina toa izany fa tsy mila fifandraisana WiFi. Azavainay ny fomba fanaovana azy.
TicWatch C2, misy fiainana mihoatra ny Apple Watch
Mobvoi dia manolotra antsika amin'ity smartwatch TicWatch C2 ity miaraka amina famolavolana famantaranandro mahazatra amin'ny vidiny tena mahaliana sy endrika tsara
Ny AirPods mainty dia efa vonona ny hanomboka amin'ny lohataona
Apple dia afaka mandefa AirPods 2 mainty vaovao amin'ny lohataona, conrtradiciendo tsaho taloha izay nametraka azy ireo ho lavo